Tire Pyrolysis, Plastic Pyrolysis, Oil Sludge Pyrolysis, Rubber Pyrolysis - NIutech
90% Possesion muna Pyrolysis Industry
China National Progress Award kuti Science & Technology
60+ Domestic Patent & 10+ International PCT
Niutech Environment Technology Corporation, iyo yakahwina Chinese National Science & Technology Progress Award, ndiye drafter of Chinese National Standard; The kambani zvinopfuura 60x patents mvumo munyika yose uye vakawanda pasi kushanda.
Niutech ndiye aitungamirira zvebhizimisi kuti nyanzvi polymer matongo (chinyorwa matai, tsvina mapurasitiki, mafuta sludge etc.) kuramba Pyrolysis Michina R & D, yepamusoro midziyo gadzira uyewo zvinhu okutengesa. The Pyrolysis yose chirimwa iri kushanda pasi vakachengeteka uye zvakatipoteredza-ushamwari ezvinhu achiita zvaidiwa EU EEA uye US EPA nemitemo.
With chinoshamisa uye nyanzvi zvekushandisa chikwata, Niutech unremittingly kuvandudza michina yayo michina kwemakore anopfuura 30, kuitira kuti kupa zvakanakisisa uye nzwisisika kugadziriswa vatengi. Niutech kuramba Pyrolysis miti zvave vakabudirira ndakagadza uye kutengeswa kushanda muna Europe, Asia uye America, uye vakawana hupfumi, magariro uye kwezvakatipoteredza kubatsira vatengi.
Industrial Kuramba Waste Tire Pyrolysis Production Line